Ciidamo howlgal Miino baaris ka sameeyay degaan ay weerareen Al-shabaab | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Ciidamo howlgal Miino baaris ka sameeyay degaan ay weerareen Al-shabaab
Ciidamo howlgal Miino baaris ka sameeyay degaan ay weerareen Al-shabaab
Ciidanka Dowladda iyo kuwa Maamulka Galmudug oo isugu jira Milateri, Boolis iyo Nabadsugid ayaa saakay waxaa howlgal ka sameeyeen deegaanka Wisil ee Gobolka Mudug oo maalmo kahor ay weerar ku qaadeen dagaalamayaasha Al-shabaab.
Ciidamada ayaa howlgalka oo ujeedkiisu ahaa miino baaris ka sameeyay gudaha iyo duleedka degaanka Wisil oo uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay Ciidanka Daraawiishta Galmudug iyo Al-shabaab, kaasi oo geystay khasaaro.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka hoggaaminaya howlgalka ayaa sheegay inuu socdo howlgal dhulka miinooyin looga baarayo, isla markaana la adkeeyay amniga Wisil ee Gobolka Mudug, ayna socon doonaan howlgalada.
Al-shabaab ayaa maalmo kahor weerar ku bilowday qarax Is-miidaamin ah ku qaaday Wisil, waxaana halkaas ka dhacay dagaal cusub oo dhexmaray Shabaabka, Ciidanka Daraawiishta Galmudug iyo dadka deegaanka oo is abaabulay.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka, waxaana halkaas ku dhintay in ka badan 30 qof oo isugu jiray Askar iyo Shacab, iyadoona Shabaabka ay sheegteen in dagaalka ay ku dileen 34 Askari, ayna qabsadeen hub iyo gaadiid.
Maqaal horeFaarax Macalin oo Dowladda Somalia ku dhaliilay dib u soo celinta xiriirka Kenya
Maqaal XigaDuqa Muqdisho oo Maanta kormeer ku tegay waddo uu dhismo ka socdo